सन्तान कस्तो बनाउने भन्नेमा अविभावक नै जिम्मेवार ! - kakhasamachar
सन्तान कस्तो बनाउने भन्नेमा अविभावक नै जिम्मेवार !
हेमन्त गिरी	काठमाडौं	जेठ ३०, २०७९
एकजना र्र्यापरले गरेको पत्रकार सम्मेलन त हेर्नुभयो होला नि । उनले बाबुआमा प्रति लगाएका आरोप र बोलेका शब्द पनि सुन्नुभयो होला । म उनी प्रति ‘जजमेन्टल’ हुन चाहन्न । तर बाबुआमा प्रतिको न्यूनतम मर्यादा र सन्तान प्रतिको अधिकतम कर्तव्य प्रति चाहिं मेरा पाठकर मित्र र सुवेच्छुक हरुलाई सचेत गराउन चाहन्छु ।
संसारमा कोही पनि कसै संग हार्न चाहन्न । तर बाबुआमा मात्र ती पात्र हुन जो आफ्ना सन्तान संग हार्नुमा खुसी मान्छन । यो ‘हार्नु’ भित्र आमाले पेट चिर्ने देखि बाबु मुगलान भासिने सम्मका योगदानहरु पर्दछन । तर जब सन्तान ठूला हुँदै जान्छन र तिनै बाबुआमाले दिलाएका टेलीभिजनरस्मार्टफोन बाट संसार देख्न थाल्छन, उनीहरुले बाबुआमालाई केवल सन्तान जन्माउने मेसिनको रूपमा परिभाषित गर्न थाल्छन, यो पछिल्ला दिनमा देखिएको परिदृश्य हो ।
यसमा के सन्तानको मात्र दोष छ रु पटक्कै छैन, मुख्य दोष बाबुआमाकै छ । सन्तानलाई माया गर्ने नाममा तपाईंहरुले उनीहरुलाई चाहिने भन्दा बढि सुविधा र भौतिक साधनहरु उपलब्ध गराइरहनुभएको छ । १० कक्षा पनि पास नगरेका बच्चाहरुलाई स्मार्टफोन र ल्यापटप र बाइक, स्कुटी लगायतका साधन उपलब्ध गराइरहनुभएको छ ।
ती साधन दिए पछि उनीहरु ‘भुल्छन’ र आफूलाई अनावस्यक ‘बोदर’ पनि गर्दैनन भन्ने तपाईंहरुको बुझाइ छ । हैनहैन, यति मात्र कहाँ हो र,, यस्ता साधन दिए पछि म मेरो छिमेकी रआफन्तर साथीभाइरदाजुभाई भन्दा बढ्ता ‘स्ट्यान्डर्ड र क्लासी’ देखिन्छु भन्ने पनि तपाईंको बुझाइ छ । वर्षौं भयो( तपाईं आफ्ना सन्तान संग बसेर गफ गर्नुभएको छैन, उनीहरुका समस्या र चाहना सोध्नुभएको छैन, उनीहरु संग खेल्नुभएको छैन, उनीहरुलाई घुमाउन लैजानुभएको छैन, उनीहरुलाई सरसल्लाह र सुझाव दिनुभएको छैन । किनकि तपाईं बिजी हुनुहुन्छ वा बिजी भए जस्तो ’प्रिटेन्ड’ गरिरहनुभएको छ ।
हो, यही तपाईंको बानीको ग़लत फाइदा सन्तानहरुले उठाइरहेका छन । उनीहरुले तपाईंलाई दिने सम्मान बिर्सिन थालिसकेका छन । खुट्टा पसारेर तपाईंको सामू पबजी खेलिरहेका छन । उत्ताउला भएर तपाईंकै छेऊछाऊमा टिकटक खिचिरहेका छन । उनीहरुले तपाईंका आफन्त, नातागोतालाई चिन्दैनन तर टिकटक फलोअरहरु सबलाई चिन्छन । उनीहरुले तपाईं नभाको बेला खाजा खान दिने घरछेऊकै छिमेकी अंकल आंटीलाई चिन्दैनन तर यूरोपरअमेरिका र कोरियाका कलाकारहरुलाई सजिलै चिन्छन । तपाईंलाई लाग्छ( तपाईंका सन्तानहरु ‘एडभान्स्ड’ छन ।
तर म भन्छु (तपाईंका वा मेरा सन्तान गँवार भइरहेका छन । र गँवार तपाईंरहामीले नै बनाइरहेका छौं । अब यस्ता सन्तान बाट न्यूनतम मर्यादाको अपेक्षा राखेर हुन्छ त हुँदैन । तर केही बिग्रेको छैन । सुधार्न सकिन्छ । एउटा निश्चित र परिपक्क उमेर नपुगे सम्म उनीहरुलाई मोबाइलरल्यापटप वा इण्टरनेट उपलब्ध हुने सामग्री नदिऊँ । दिए पनि प्रत्यक्ष निगरानी राखौं । उनीहरु संग धेरैभन्दा धेरै संवाद गरौं, आफ्नो आसपासमै राखौं, छुट्टै कोठामा चुकुल लगाएर दिनभर बस्न नदिऊँ ।
उनीहरुका समस्या सोधौं । उनीहरु संग उनीहरु जस्तै भएर खेलौं । किचनका काममा उनीहरुलाई प्रोत्साहन गरौं । गार्डेनिङमा उनीहरुको ‘हेल्प’ मागौं । घरको सरसफाइ तिमीहरुले नै गर्नुपर्छ भनेर सिकाऊँ । स्कूलहरुले पनि अत्यधिक होमवर्क नदिऊँ, त्यसको सट्टा क्लासमै प्राक्टिस गराऊँ । स्कूलमा एउटा रूल र घरमा अर्को रूल हुँदा बच्चाको मनःस्थिति बिग्रिने हो, सकेसम्म टीचर र प्यारेट्सले समन्वय गरौं । बच्चाहरुको संगतमा विशेष ध्यान पुर्याऊँ । के खान्छ, कहाँ जान्छ, कसरी बोल्छ, कसरी व्यवहार गर्छ, यस्ता कुरामा हस्तक्षेप जस्तो नदेखिने गरी सूक्ष्म निगरानी र परामर्श गरौं । सबैभन्दा ठूलो समस्या स्मार्टफोन भएको छ, सकेसम्म बच्चाहरुको अगाड़ी आफूले पनि स्मार्टफोन चलाएर नबसौं ।
हाम्रो समाज अझै पनि संस्कार र स्वतन्त्रता बिचको द्वन्द्व र दुविधामा छ । संस्कार र संस्कृतिका धनी पनि हामी नै छौं अनि थेग्नै नसकिने गरी संचार प्रविधिको भेल पनि हाम्रो समाजमा नै पसिसकेको छ । त्यसैले हामी ‘कन्फ्यूजन’ मा पनि छौं । बच्चालाई सुखसुविधा दिनु गलत हैन । तर सुखसुविधा कसरी दिने भन्ने कुरा नजान्नु चाहिं घातक हुन सक्छ । त्यसैले हामी कन्फ्यूजनमा छौं । यो कन्फ्यूजनको मुख्य जड अहिलेलाई स्मार्टफोन नै हो । त्यसको न्यूनतम प्रयोग गरौं र बच्चाहरुलाई पनि त्यसप्रति कम प्रोत्साहन गरौं ।
हाललाई यो नै पहिलो र उत्तम उपाय हो । त्यसपछि हामी संग प्रशस्त समय हुनेछ र हामी अझै धेरै कुरा सोंच्नेछौं ।सचेत बनौं । नत्र त कुनबेला हामीलाई हाम्रै सन्तानले ‘मिलेन लेभल तेरो बाऊ बोला’ भन्ने हुन, थाहा छैन । बैकुण्ठबास भइसकेका बाऊ खोज्न कहाँ जानु त्यतीबेला फेरि ।
हेमन्त गिरीको फेसबुकबाट साभार गरिएको । यो लेखकको नितान्त निजि विचार हो ।
३० जेठ २०७९, सोमवार १७:०४ बजे प्रकाशित
प्रश्नपत्र हुबहु -त्रिविद्वारा छानविन समिति गठन
विद्यार्थी नै चोराखन्ति !
दल खोल्दैमा बन्छ त नेपाल ?
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नेबारे के भन्छन सांसद ?
स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकको घोषणा कस्तो ?
काठमाडौँ महानगर प्रमुखको निर्वाचनमा बालेनको प्रसंग
स्वास्थ्य रणनीति-सरकारी अस्पताल नभएको ठाउँमा मात्र निजी अस्पताल